सन नेपाल लाइफको बिक्री प्रबन्धकमा एसबीआई मर्चेन्ट, ६० करोडको सेयर निष्कासन गर्ने  BikashNews
सन नेपाल लाइफको बिक्री प्रबन्धकमा एसबीआई मर्चेन्ट, ६० करोडको सेयर निष्कासन गर्ने
२०७५ जेठ ३१ गते १३:३५ विकासन्युज
काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । उक्त नियुक्ती सम्बन्धी सम्झौतामा सन नेपाल लाइफका कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) राजकुमार अर्याल र नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैकिङका(सीईओ) रमेश घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस सम्झौतापश्चात इन्स्योरेन्सको सेयर हस्तान्तरण तथा धितोपत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम बिक्री प्रबन्धक एसबीआई मर्चेन्टले गर्ने भएको छ ।
कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्षसम्म २ अर्ब पुँजी पुर्याउनको लागि एसबीआई मर्चेन्टसँग सम्झौता गरेको इन्स्योरेन्सका कामु सीईओ अर्यालले बताएका छन् । कार्यक्रममा एसबीआई मर्चेन्टका सीईओ घिमिरेले बिहीबार सम्झौता भएअनुसार इन्स्योरेन्सको ६० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन प्रमुखको रुपमा निष्कासन गर्ने बताएका छन् ।
हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ । बीमा समितिले ताके बमोजिम पुँजी पुर्याउनको लागि कम्पनीले ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ६० लाख कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । साे मात्राकाे सेयर निष्कासन पश्चात कम्पनीको पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने छ ।
इन्स्योरेन्सले हालसम्म ७ लाख बढी बीमालेख बिक्री गरिसकेको छ । हालसम्म २० शाखा स्थापना गरिसकेको इन्स्योरेन्सले चालु आवमा थप १५ वटा शाखा विस्तार गरि कुल ३५ वटा पुर्याउने कम्पनीको लक्ष्य छ । साथै, सोही आवको असोजसम्म ८६ वटा उपशाखा पुर्याउने तयारी गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
सिनर्जी फाइनान्सका सेयरधनीलाई खुसीको खबर, बेष्ट फाइनान्सको सेयर अब बेच्न पाइने
छिमेक लघुवित्तको नगद लाभांश वितरण सुरु, बोनस सेयर चाँहि कहिले ?
३ करोडको मेशिन बिग्रियो, हेटौँडा सिमेण्ट उद्योगमा कच्चापदार्थ उत्पादन ठप्प
समीट माइक्रोफाइनान्स अब लघुवित्तमा परिणत, स्टक सिम्बोल पहिलेकै
कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंकको बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत
अब मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेलाई पनि हेल्मेट अनिवार्य !
एक लाखको मालिक्नीले ८ अर्बको बाणिज्य बैंक हल्लाइन्, धेरै कम्पनीमा झमेला हुन सक्ने
एभरेष्ट बैंकको अफर : मासिक ९५९९ तिरेर आफ्नै घर बनाउनुस्
चेक बाउन्समा १२ वर्षको कैद सजाय ६ महिनामा झारिँदै, पैसा नभएको चेक काट्नेबित्तिकै कारबाही नहुने
भाटभटेनीको सेयर बेचेर सबै नेपालीलाई व्यापारमा जोड्ने योजना, ५० हजार जनाले रोजगारी पाउने
उच्च रक्तचापका बिरामीले औषधी नियमित नखाए प्यारालाईसिस हुने सम्भावना बढी : डा. अनिल भट्टराई